Alakamisy 21, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Nifantoka izahay… er… nikiakiaka momba ny finday taraiky loatra ary antenaiko fa hahazo ny sainao ianao. Raha manao zavatra iray ianao anio, dia tokony hizaha toetra ny mailakao izay andefasanao ny mpivarotra mailakao hahitanao raha tena afaka mamaky azy ireo ny olona. Rehefa namolavola modely mailaka fototra ho an'ny mailaka ho an'ny vahaolana WordPress izahay, CircuPress, manangana modely mailaka mamaly izay nanova ny habeny, azo vakiana ary niasa nanerana ny plethora an'ny
Tamin'ity herinandro ity dia nanana traikefa nahafinaritra indrindra nampiseho ny vahaolana amin'ny horonantsary Vee24 an-tserasera ho an'ny tranonkala aho. Ny orinasa dia manodidina ny taona vitsivitsy nanatontosa fitaovana sy rindrambaiko mitambatra ho vahaolana amin'ny serivisy izay takatry ny saina tokoa. Ny zava-bitan'i Vee24 dia tsy mahagaga. Rehefa manasonia anao ny mpanjifa dia mividy ny fitaovana am-boalohany izy ireo, izay misy tilikambo misy fakan-tsary, jiro eo aloha, mpanara-maso ary eny amin'ny rivotra aza